सुहागरातको पीडा सहन नसकेर ज्यान गुमाएकी रिता… - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बलात्कार विरुद्धको अभियान १
लक्षमण ढुंगाना "दीक्षित"
शनिवार, माघ १७ २०७७
. बलात्कार र योसँगै जोडिएका मनोवैज्ञानिक कारण
. के विवाहित महिलामाथि पनि बलात्कार हुन्छ ?
. बलात्कार र राष्ट्रप्रमुखको मौनता !
आज चाँडै उठाउनुभयो, सधैं तातोपानी नभए नुहाउनुपर्दैन भन्दै तँ भनेर हप्काउने आमाले पानीमा आज चिसै पानीमा नुहाउन लगाउनुभयो। मान्छेहरु बाक्लै थिए घर वरिपरि, चारतिर केराका बोट र बाँसहरु गाढेर राता सेता कपडाहरुले सिङ्गारेर राम्रो बनाइको थियो बीच आगन। रमालाई अचम्म लाग्यो। के हुँदैछ आज हाम्रो घरमा? अनि आगन बीचतिर देखाउँदै सोधी आमालाई,आमा त्यो के हो ?
एकरात लुईंटेल गाउँको पल्लो छेउ बालिका चिच्याएको आवाज सुनियो,एकपटकको आवाज दोहारिएन।कोही बच्चा झगडा गरेर रोएको ठानेर सुत्यो पुरै गाउँ। पीडा र याचना मिश्रित रोदन निरन्तर निकालीरहिन् रमाले अन्तरमनबाट तर आवाजको रुप लिन पाएन। मुख छोपीरह्यो आफ्नै भनिएकोले। केहीछिनपछि पोखियो ऊ र पछारियो अर्कोपट्टि। रमा निदाइन्,कहिल्यै नउठ्नेगरि।असह्य पीडा सहन नसकेर धर्तिबाटै बिदा भइन् त्यही रात।
रमा बला त्कृत भइन् ।एक बालिकाको अस्मिता र जीवन बला त्कृत भयो। बला त्कार मात्र हैन धर्तिबाटै अस्तित्व लुटियो।यो अक्षम्य अप राध हो,महापाप हो तर समाज र कानुनले बला त्कार भएको देखेन,जीवन लुटेको देखेन,पाप गरेको देखेन,बरु उल्टै मृत शरीर देखाउँदै कमजोर र पापिनीको बिल्ला भिरायो अबोध बालीकालाई। किन कि उनको विवाह भैसकेको छ। विवाह भएकै कारण उनी बालिका भएर पनि बालिका भइनन्, बला त्कृत भएर पनि बला त्कृत भइनन्, ह त्या भएर पनि स्वाभाविक मृतक बनिन् कानुन र समाजकालागि ।
गाला र घाँटीहरुमा नीला दाग, छरपस्ट कपाल, लत्पत्तिको श्रृङ्गार,कम्मरबाट तर रगताम्य लासलाई भोलीपल्ट बिहानै निकालियो । तुलसाको मठ नजिक राखियो,चार हात लामो कात्रोले बेरियो र लगियो घाटतिर। छोरी समान बुहारीको मृत्यु हुँदा पनि कुनै पिर परेको शंकेत देखिएन सासु ससुराहरुको मुहारमा।कति निठुर र क्रूर हुन्छन् मान्छेहरु भरखरै प्रकृतिले नयाँ उत्साहकासाथ उमारेको बिरुवा बोट हुन नपाई निमोठिनुपर्यो।
१० वर्षे कलीलो जीवन आधा खण्टामै घाट पुर्याए मलामीहरुले, दाउराहरु खोजियो। तयार पारियो सानो चिता। लासलाई सर्वप्रथम खोला छेउ लगियो,पालैपालो पानी मुखमा हाल्दिए आफ्ना भनिएकाहरुले। ती आफ्ना होइनन्, जसले ह त्यालाई हत्या भनेनन्, ह त्यारालाई ह त्यारा देखेनन्, ती कसरी आफ्ना हुन्छन् ?
त्यसपछि शवबाट लुगा झिक्ने काम सुरु भयो। लुगा भन्दा पनि पहिला हतार हतार गहना झिके र ख्यालगरेर खल्तीतिर राखे श्रीमानले।।लुगा झिक्दै गर्दा पटुकामा एउटा पोको।खोलेर हेर्ने सहमति भयो। रुमालमा बेरेर राखिएको रहेछ दुई ओटा सुनका मुन्द्रि, सायद आमाले अन्मिने बेलामा दिएकी थिइन्। श्रीमानले हर्षित हुँदै लियो र हाल्यो गाजीमा त्यो पनि।निर्ममताकासाथ जीवन लुट्ने मान्छे माटोमा भेटिने पहेंलो खनिजलाई भने कति माया गर्दो रहेछ। सायद मानवताभन्दा पनि सम्पत्तिले राज गरेको छ दुनियाँमा।
केही छिनमा चितामाथि राखियो लास। चरम पीडामा याचना सहित चिच्याउँदा त हाँसी हाँसी जीवन लुटेको श्रीमानलाई चुपचाप रहेको निर्जिव मुढोमा आगो लगाउन के भयो र? लगायो सजिलै आगो उसले। रमाको कलीलो शरीर खरानी पार्न धेरैबेर लगाएन आगोले पनि, केहीबेरमै रमा धुवाँ भनेर लागिन् आकाशको यात्रामा,,
बेहुली हुन पाउनु जीवनकै रमाइलो क्षण मानेकी रमाले आखिर बेहुली भएकै कारण जीवन गुमाउनुपर्यो, जुनु र पुष्पाहरुसंग अन्तिम पटक खेल्न नपाई सकीइन् रमा, आमाको काखमा रहर पुगुन्जेल पनि बस्न पाइनन्, राम्रोसँग संसार देख्न नपाई बन्द भए आँखाहरु, रहर गरेको मुन्द्रा लगाउन नपाई जले कानहरु।यो यथार्थको निर्मम विवाह भन्दा खेलाँचीकै विवाह कति सुन्दर थियो।समान उमेरहरुको विवाह, समान भावना, समान आशा र आकांक्षा, दुःखमा रुन्थे सबै साथीहरु, खुसीमा हाँस्थे सबै, कति आत्मीय थियो त्यो कृत्रिम सम्बन्ध यो यथार्थ सम्बन्ध भन्दा।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, भदौ ५ २०७८ १५:२६:५५
Tags :बलात्कार बिरुद्धको अभियान